Ruzivo rwakadzama nezve CHECKDB Kanganiso "Row mu sys.xxx haina mutsara unowirirana mu sys.xxx"
musha Products DataNumen SQL Recovery CHECKDB Kanganiso: Row mu sys.xxx haina mutsara unoenderana mu sys.xxx
Ruzivo rwakadzama nezve CheckDB Kanganiso "Row mu sys.xxx haina mutsara unoenderana mu sys.xxx"
Paunenge uchishandisa DBCC CHECKDB ne REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS paramende kugadzirisa yakashata .MDF dhatabhesi, seizvi:
iwe unoona inotevera yekukanganisa meseji:
Kugadzirisa: Iyo yakakwenenzverwa index yakabudirira kuvakwazve kwechinhu "syscolpars" mudhatabhesi "Error1".
Gadziriso: Iyo isina kuvharirwa indekisi yakabudirira kuvakwazve kwechinhu "syscolpars" mudhatabhesi "Error1".
DBCC mhedzisiro ye 'Error1'.
Sevhisi Broker Msg 9675, State 1: Meseji Mhando dzakaongororwa: 14.
Service Broker Msg 9676, Nyika 1: Zvibvumirano zveSevhisi zvakaongororwa: 6.
Service Broker Msg 9667, State 1: Masevhisi akaongororwa: 3.
Service Broker Msg 9668, Nyika 1: Mitsara yeSevhisi yakaongororwa: 3.
Service Broker Msg 9669, Nyika 1: Kukurukurirana Endpoints akaongororwa: 0.
Service Broker Msg 9674, Nyika 1: Mapoka Ekukurukurirana akaongororwa: 0.
Service Broker Msg 9670, State 1: Remote Service Kusungwa kwakaongororwa: 0.
Service Broker Msg 9605, Nyika 1: Kukurukurirana Zvakatangira zvakaongororwa: 0.
Msg 8992, Chikamu 16, State 1, Mutsara 8
Tarisa Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 69) mu sys. Zvinhu (type = S) haina mutsara unowirirana (object_id = 69, column_id = 1) mu sys.columns.
Tarisa Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 71) mu sys. Zvinhu (type = S) haina mutsara unowirirana (object_id = 71, column_id = 1) mu sys.columns.
Tarisa Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 72) mu sys. Zvinhu (type = S) haina mutsara unowirirana (object_id = 72, column_id = 1) mu sys.columns.
Tarisa Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 73) mu sys. Zvinhu (type = S) haina mutsara unowirirana (object_id = 73, column_id = 1) mu sys.columns.
CHECKDB yakawana 0 ekugovana zvikanganiso uye makumi mana neshanu zvikanganiso zvisingaenderane nechinhu chimwe chete chinhu.
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysrscols'.
Kune mitsara gumi nembiri mumapeji gumi nemana echinhu "sys.sysrscols".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysrowsets'.
Pane mitsara zana nemakumi mana nesere mumapeji matatu echinhu "sys.sysrowsets".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysclones'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysclones".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysallocunits'.
Pane mitsara zana nemakumi maviri nenomwe mumapeji maviri echinhu "sys.sysallocunits".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysfiles1'.
Pane mitsara miviri mumapeji 2 echinhu "sys.sysfiles1".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysseobjvalues'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysseobjvalues".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syspriorities'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syspriorities".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysdbfmamvemve '.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysdbfmamvemve ”.
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysfgfrag'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysfgfrag".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysdbfiles '.
Pane mitsara 2 mumapeji 1 echinhu "sys.sysdbfiles ”.
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syspru'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syspru".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysbrickfiles'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysbrickfiles".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysphfg'.
Kune mitsara 1 mumapeji 1 echinhu "sys.sysphfg".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysprufiles'.
Pane mitsara miviri mumapeji 2 echinhu "sys.sysprufiles".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysftinds'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysftinds".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysowners'.
Kune mitsara gumi nemana mumapeji 14 echinhu "sys.sysowners".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysdbreg'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysdbreg".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysprivs'.
Kune mitsara zana nemakumi mana mumapeji 140 echinhu "sys.sysprivs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysschobjs'.
Kune mitsara makumi maviri neshanu nemaviri mumapeji makumi maviri nemapfumbamwe echinhu "sys.sysschobjs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syscsrowgroups'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syscsrowgroups".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysexttables'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysexttables".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syscolpars'.
Kugadzirisa: Iyo yakakwenenzverwa index yakabudirira kuvakwazve kwechinhu "sys.syscolpars" mudhatabhesi "Error1".
Kugadzirisa: Iyo peji (1:53) rakaendeswa kubva kuchinhu ID 41, index ID 1, partition ID 281474979397632, kupihwa unit ID 281474979397632 (Type In-row data).
Kugadzirisa: Iyo isina kuvharirwa index yakabudirira kuvakwazve kwechinhu "sys.syscolpars, nc" mudhatabhesi "Error1".
Msg 8945, Chikamu 16, State 1, Mutsara 8
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 41, index ID 1 ichavakwazve.
Iko kukanganisa kwagadziriswa.
Msg 8928, Chikamu 16, State 1, Mutsara 8
Chinhu ID 41, indekisi ID 1, mugove ID 281474979397632, inogovera unit ID 281474979397632 (mhando In-mutsara data): Peji (1:53) harina kugadziriswa. Ona zvimwe zvikanganiso zveruzivo.
Msg 8939, Chikamu 16, State 98, Mutsara 8
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 41, index ID 1, mugove ID 281474979397632, govera unit ID 281474979397632 (mhando In-mutsara data), peji (1:53). Kwayedza (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) yakundikana. Maitiro ari 2057 uye -4.
Msg 8976, Chikamu 16, State 1, Mutsara 8
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 41, index ID 1, partition ID 281474979397632, kupihwa unit ID 281474979397632 (mhando In-mutsara data). Peji (1:53) haina kuoneka muscan asi mubereki wayo (1: 111) uye yapfuura (1: 113) vachinongedzera kwairi. Tarisa chero akanganisa kare.
Msg 8978, Chikamu 16, State 1, Mutsara 8
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 41, index ID 1, partition ID 281474979397632, kupihwa unit ID 281474979397632 (mhando In-mutsara data). Peji (1:56) irikushaiwa chirevo kubva papeji rapfuura (1:53). Zvinogona kuitika cheni yekubatanidza dambudziko.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 41, index ID 2 ichavakwazve.
Kune mitsara 845 mumapeji gumi nemashanu echinhu "sys.syscolpars".
CHECKDB yakawana 0 zvikanganiso zvekugovera uye zvina zvinowirirana zvikanganiso mutafura 'sys.syscolpars' (chinhu ID 4).
CHECKDB yakagadzika 0 kugovera zvikanganiso uye zvina zvinowirirana zvikanganiso mutafura 'sys.
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysxlgns'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysxlgns".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysxsrvs'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysxsrvs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysnsobjs'.
Kune mitsara 1 mumapeji 1 echinhu "sys.sysnsobjs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysusermsgs'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysusermsgs"
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syscerts'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syscerts".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysrmtlgns'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysrmtlgns".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syslnklgns'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syslnklgns".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysxprops'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysxprops".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysscalartypes'.
Pane mitsara makumi matatu nemana mumapeji 34 echinhu "sys.sysscalartypes".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.systypedsubobjs'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.systypedsubobjs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysidxstats'.
Pane mitsara makumi maviri nenomwe mumapeji mashanu echinhu "sys.sysidxstats".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysiscols'.
Pane mitsara makumi matatu nemapfumbamwe nemapfumbamwe mumapeji maviri echinhu "sys.sysiscols".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysendpts'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysendpts".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syswebmethods'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syswebmethods".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysbinobjs'.
Pane mitsara makumi maviri nematatu mumapeji 23 echinhu "sys.sysbinobjs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysaudacts'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysaudacts".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysobjvalues'.
Pane mitsara makumi maviri nematatu mumapeji makumi maviri echinhu "sys.sysobjvalues".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syscscsegsegments'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syscscsegsegments".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syscsdictionaries'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syscsdictionaries".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysclsobjs'.
Pane mitsara gumi nematanhatu mumapeji 16 echinhu "sys.sysclsobjs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysrowsetrefs'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysrowsetrefs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysremsvcbinds'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysremsvcbinds".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysmultiobjrefs'.
Kune mitsara 107 mumapeji 1 echinhu "sys.sysmultiobjrefs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysguidrefs'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysguidrefs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysfoqueues'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysfoqueues".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syschildinsts'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syschildinsts".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syscompfragments'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syscompfragments".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysftsemanticsdb'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysftsemanticsdb".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysftstops'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysftstops".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysftproperties'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysftproperties".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysxmitbody'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysxmitbody".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysfos'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysfos".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysqnames'.
Pane mitsara makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe mumapeji 98 echinhu "sys.sysqnames".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysxmlcomponent'.
Pane mitsara zana mumapeji 100 echinhu "sys.sysxmlcomponent".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysxmlfacet'.
Pane mitsara 112 mumapeji 1 echinhu "sys.sysxmlfacet".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysxmlplacement'.
Pane mitsara gumi nemapfumbamwe mumapeji 19 echinhu "sys.sysxmlplacement".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysobjkeycrypts'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysobjkeycrypts".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysasymkeys'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysasymkeys".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syssllides'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syssqlguides".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysbinsubobjs'.
Pane mitsara mitatu mumapeji 3 echinhu "sys.sysbinsubobjs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syssoftobjrefs'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syssoftobjrefs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.plan_persist_plan'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.plan_persist_plan".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.plan_persist_runtime_stats".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.plan_persist_context_settings'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.plan_persist_context_settings".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sqlagent_jobs'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sqlagent_jobs".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sqlagent_jobsteps".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sqlagent_job_history'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sqlagent_job_history".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sqlagent_jobsteps_logs".
DBCC mhedzisiro ye 'TestTable'.
Kune mitsara chiuru mazana mapfumbamwe mumapeji 11000 echinhu "TestTable".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.queue_messages_1977058079'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.queue_messages_1977058079".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.queue_messages_2009058193'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.queue_messages_2009058193".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.queue_messages_2041058307'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.queue_messages_2041058307".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.filestream_tombstone_2073058421".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syscommittab'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.syscommittab".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.filetable_updates_2105058535".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.plan_persist_query_text'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.plan_persist_query_text".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.plan_persist_query'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.plan_persist_query".
CHECKDB yakawana 0 zvikanganiso zvekugovera uye gumi nemaviri zvikanganiso mudhatabhesi 'Error8'.
CHECKDB yakagadzika 0 kugovera zvikanganiso uye gumi nemaviri zvikanganiso mukushomeka 'Error4'
Kuitwa kweDBCC kwapera. Kana DBCC yakadhinda mameseji ekukanganisa, bata system yako manejimendi.
Msg 824, Chikamu 24, State 2, Mutsara 8
SQL Server yakaona zvine mutsigo kuenderana-kwakavakirwa I / O kukanganisa: isiriyo checksum (inotarisirwa: 0xeddf7c98; chaiyo: 0xed637c9c). Izvo zvakaitika panguva yekuverengwa kwepeji (1:53) mune dhatabhesi ID 39 pane 0x0000000006a000 mufaira 'C: Chirongwa Mafaira SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mamwe mameseji mu SQL Server yekukanganisa danda kana system yechiitiko rogi inogona kupa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo yakaipa mamiriro ekukanganisa anotyisidzira dhata rekuvimbika uye rinofanira kugadziriswa nekukasira. Pedzisa yakazara yakazara database kuenderana cheki (DBCC CHECKDB). Iko kukanganisa kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda; kuti uwane rumwe ruzivo, ona SQL Server Mabhuku Online.
Tarisa Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 23) mu sys. Zvinhu (type = S) haina mutsara unowirirana (object_id = 23, column_id = 1) mu sys.columns.
Tarisa Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 24) mu sys. Zvinhu (type = S) haina mutsara unowirirana (object_id = 24, column_id = 1) mu sys.columns.
Kugadzirisa: Iyo peji (1:59) rakaendeswa kubva kuchinhu ID 41, index ID 1, partition ID 281474979397632, kupihwa unit ID 281474979397632 (Type In-row data).
Chinhu ID 41, indekisi ID 1, mugove ID 281474979397632, inogovera unit ID 281474979397632 (mhando In-mutsara data): Peji (1:59) harina kugadziriswa. Ona zvimwe zvikanganiso zveruzivo.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 41, index ID 1, mugove ID 281474979397632, govera unit ID 281474979397632 (mhando In-mutsara data), peji (1:59). Kwayedza (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) yakundikana. Maitiro ari 2057 uye -4.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 41, index ID 1, partition ID 281474979397632, kupihwa unit ID 281474979397632 (mhando In-mutsara data). Peji (1:59) haina kuoneka muscan asi mubereki wayo (1: 111) uye yapfuura (1: 155) vachinongedzera kwairi. Tarisa chero akanganisa kare.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID 41, index ID 1, partition ID 281474979397632, kupihwa unit ID 281474979397632 (mhando In-mutsara data). Peji (1:112) irikushaiwa chirevo kubva papeji rapfuura (1:59). Zvinogona kuitika cheni yekubatanidza dambudziko.
Kune mitsara 832 mumapeji gumi nemashanu echinhu "sys.syscolpars".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysxmitqueue'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysxmitqueue".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysrts'.
Kune mitsara 1 mumapeji 1 echinhu "sys.sysrts".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysconvgroup'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysconvgroup".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysdesend'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysdesend".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.sysdercv'.
Pane mitsara 0 mumapeji 0 echinhu "sys.sysdercv".
DBCC mhedzisiro ye 'sys.syssingleobjrefs'.
Kune mitsara gumi nemanomwe mumapeji 171 echinhu "sys.syssingleobjrefs".
CHECKDB yakawana 0 zvikanganiso zvekugovera uye gumi nemaviri zvikanganiso mudhatabhesi 'Error6'.
SQL Server yakawana inonzwisisika inoenderana-yakavakirwa I / O kukanganisa: isiriyo checksum (inotarisirwa: 0x9eb87140; chaiyo: 0xdeb84c40). Zvakaitika panguva yekuverengwa peji (1:59) mune dhatabhesi ID 39 pane 0x00000000076000 mufaira 'C: Chirongwa Mafaira SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mamwe mameseji mu SQL Server yekukanganisa danda kana system yechiitiko rogi inogona kupa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo yakaipa mamiriro ekukanganisa anotyisidzira dhata rekuvimbika uye rinofanira kugadziriswa nekukasira. Pedzisa yakazara yakazara database kuenderana cheki (DBCC CHECKDB). Iko kukanganisa kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda; kuti uwane rumwe ruzivo, ona SQL Server Mabhuku Online.
iko 'Error1' izita re database ye MDF yakashata iri kugadziriswa.
Msg 8992 uchiteverwa Msg 3852 kukanganisa kukanganisa kusagadzikana.
Screenshot yekukanganisa meseji:
mune SQL Server MDF dhatabhesi, kune akawanda system matafura yaishandiswa kuchengetedza chimiro uye meta dhatabhesi.
Kana CHECKDB yawana kuti pane kusawirirana pakati pematafura maviri ehurongwa, inozivisa meseji yekukanganisa Msg 8992 uye Msg 3852.
Unogona kushandisa chigadzirwa chedu DataNumen SQL Recovery kudzoreredza iyo data kubva kune yakashata MDF faira uye kugadzirisa iyi kukanganisa.
Semuenzaniso yakashata MDF mafaera ayo anokonzeresa iyoMsg 8992 uye Msg 3852 mhosho:
SQL Server mhando Yakashata MDF faira MDF faira rakagadziriswa ne DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Kukanganisa4_1.mdf Kukanganisa4_1_fixed.mdf
SQL Server 2014 Kukanganisa4_2.mdf Kukanganisa4_2_fixed.mdf